Liverpool Iyo Arsenal Oo Dib U Soo Cusbooneysiinaya Dagaalkooda Saxiixa Thomas Lemar Iyadoo Monaco Ay Isku Diyaarineyso Inay Fasaxdo Xiddiga Faransiiska - Laacib.net
Liverpool Iyo Arsenal Oo Dib U Soo Cusbooneysiinaya Dagaalkooda Saxiixa Thomas Lemar Iyadoo Monaco Ay Isku Diyaarineyso Inay Fasaxdo Xiddiga Faransiiska
Liverpool iyo Arsenal ayaa mar kale ku dagaalami doona saxiixa Thomas Lemar xagaaga danbe, sida lagu dabaacay saaka jariirada Daily Mirror.
Madaxa kooxda Monaco Vadim Vasilyev ayaa xaqiijiyay inuu la filanayo inuu ciyaaryahanka ka tago kooxda heysata horyaalka Faransiiska ka dib Koobka Adduunka, isagoo yiri: “Waa wax haboon in ciyaartoy loo ogolaado inay baxaan.”
Lemar oo 21 sanno jir ah ayaa diirada u saarnaa labada tababare ee Jurgen Klopp iyo Arsene Wenger xagaagii la soo dhaafay, iyadoo Vasilyev uu daboolka ka qaaday in Arsenal ay aad ugu dhaweyd inay heshiis 92 milyan ginni kula wareegto ciyaaryahanka maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga xagaaga ilaa iyoo Lemar uu ka baxay heshiiska.
Liverpool ayaa iyagana maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga xagaaga waxa ay Paris u direen dhakhaatiir tijaabada caafimaadka marsiisa Lemar haddii ay heshiis la gaaraan ka hor inta aysan u weecanin Alex Oxlade-Chamberlain.
Labada kooxood ayaa muddo dheer xiiseynayay xiddiga cagta bidix ku dheela ee Faransiiska kaasoo Monaco ugu fadhiya kaliya 4 milyan ginni oo ay kula soo wareegeen sannadii 2015 markii uu u ciyaarayay kooxda Caen.
Lemar ayaa arkay qaar ka mid ah xiddigihii ay horyaalka wada qaadeen sida Bernando Silva, Tiemoue Bakayoko iyo Kylian Mbappe oo baxay xagaagii ka dib markii ay Monaco ku hogaamiyeen horyaalka Ligue 1 iyo semi-finalka Champions League.
Inkastoo ay jiraan warar xan ah oo sheegaya inuu baxayo bisha Janaay, hadana waa uu ka cagajiidayaa inuu baxo xilli ciyaareedka oo weli socda gaar ahaan iyadoo Koobka Adduunka uu soo socdo.